CHAN 2018: Morocco oo ku guuleysatay koobka, markii ay Garaacday Nigeria
Thursday, January 24th, 2019 - 09:46:59
Monday February 05, 2018 - 15:57:48 in Wararka by Muuse Cabdi
Morocco ayaa noqotay xulkii ugu horreeyay ee isagoo martigelinaya ku guuleysta koobka African Nations Championship (CHAN) keddib markii ay 4-0 guul ah ka gaareen 10-Laacib oo Nigeria ah final dhacay Axaddii.
Labada qeybood ee ciyaartaba waxaa ku wanaagsanaa kooxda martigeliyeyaasha Morocco waxaana Zakaria Hadraf uu dhaliyay gool ka hor inta aan Nigeria laacibkeeda Peter Eneji Moses Garoonka looga saarin Jaallihii labaad.
Walid El Karti iyo Hadraf – ayaa dhaliyay goolal kale si ay – Morocco dhaqso ugu hoggaamiso ciyaartan.
Waxaa soo xiray dhaliska Ayoub El Kaabi, oo laba mar oo kalena Birta ay uga dhaceen darbooyin uu tuuray, wuxuuna dhaliyay goolkiisii 9-aad ee Tartanka oo ah kan ciyaartoyda ka ciyaarta horyaallada Qaaradda Afrika midka ay ku kulmaan.
Morocco fursaddeedii koobaad waxay timid daqiiqaddii 3aad markii Walid El Karti uu darbo xooggan dhanka goosha u laaday.
Waxayna ku qaadatay 4 daqiiqo kaliya in ay dhaliyaan goolka keddib khasaarinta fursaddii hore iyadoo Ayoub El Kaabi uu madaxa ku dhaliyay, Calansidaha ayaase mar ku u taagay gacanta oo yiri kubaddu waxay ka baxday garoonka inta aysan soo gaarin Weeraryahanka.
El Kaabi ayaa dhowr isku day sameeyay haddana Nigeria goosha ninka u hayay ee Oladele Ajiboye ayaa sameeyay 2 fursad badbaadin oo cajiib ahaa ka hor inta aysan Morocco cadaadiska sii badin.
El Kaabi ayaa goolashiisa tartanka ku muteystay in loo magacaabo laacibkii ugu fiicnaa wuxuuna soo jiitay indhaha Macallinka Sare ee Xulka Morocco Herve Renard kaasoo daawanayay kulamada xulka si uu u diyaarsado qaran adag oo uga qeyb gala koobka 2018 ka dhacaya Ruushka uu World Cup.